Ubaxii Deyrta - Qaybtii 6aad - Boga Wise Man
Ubaxii Deyrta – Qaybtii 6aad
October 26, 2019 qawdhan
Jamaal su’aalo badan ayaa kusoo dhacay maskaxdiisa. Inkastoo oo aanu saaxiibkii ku aqoon nin haasaawaha dumarka ku dheereeya balse waxa uu ku yaqaanay nin wax kasta tayada ka raaca.
Tusaale ahaan markay noqoto dhinaca dhegaysiga heesaha, xulashada buugaagta, xulashada filimaanta iyo maqaaxiyaha cuntada wanaagsanba Jamaal waxa uu ahaa mid Naasir u daba fadhiista.
Koley inkastoo aanu dumar aqoon hadana aqoon hagaagsan oo tayo uu ku kala saarayo ayuu leeyahay ayuu is yidhi Jamaal.
Waxa Jamaal kusoo dhacday niyadiisa inuu caawiyo saaxiibkii oo intuu isagu inanta barto kadib is baro inanta iyo saaxiibkii Naasir.
Sidii caadiga ahayd markay gaadho saacadu 8.15 habeenimo waxa uu baxaa socod yar oo madaxa kusoo furto oo badanka qaata 30 daqiiqo.
Guriga ayuu kasoo baxay isagoo dhididkii gym-ka kasoo maydhay, waxna soo yara cunay oo nefis dareemaya. Dabaqii uu degenaa ee 7aad ayuu kasoo raacay lift-gii. Liftt-gii waxa uu istaagay dabaqii 1aad. Waxaana soo gashay Eman oo xidhan isku joog isboorti ah.
Markiiba indhaha ayay qac isku siiyeen. Eman deg-deg ayay indhaha uga lalisay iyadoo yara naxday. Saleebaan qudhiisu wuu naxay laakiin lagama dareemin.
Naxdintii ayay Eman is tidhi lasoo bax mobile-ka oo isku mashquuli. Mobile-kii ayaa ka duulay oo dhulka intuu ku dhacay weliba Saleebaan lugihiisa hoos galay.
Isagoon Saleebaan mobile-kii weli dhulka kasoo qaadin weli, Eman’a ay soo eegayso iyadoo naxdintii wejigeeda ka muuqatay ay khajilaad isu bedeshay ayuu lift-gii istaagay oo la gaadhay dabaqii hoose ee ay kaga degi lahaayeen.
Saleebaan mobile-kii dhulka ayuu ka qaaday, intaanu u dhiibina waxa uu ka eegay inuu dilaacay iyo inkale. Wuu u dhiibay waxaanu ku yidhi “Luckily it is not broken (Nasiib wanaag muu jabin)”
Eman intay mobile-kii ka qaadatay oo ay dibadana uga baxday lift-gii ayay ku tidhi “Mahadsanid adeer”
Khajilaadii ayay af Soomaali ugu jawaabtay halka uu Saleebaan isagu af Ingiriisi kula hadlay.
Saleebaan markii uu arkay inay aad u khajilsantahay ayuu damcay inuu dejiyo oo khajilaada ka bi’iyo.
Saleebaan: Soomaaliyad tahay oo Soomaali baad igula hadashay, fariid baad tahay. Laakiin adeer maan gaadhin ee walaal I dheh.
Eman: Mahadsanid laakiin da’ ahaan adeerkay waad is le’egtihiin. Af Soomaaligana, Soomaaliyad ayaan ahay maxaan ugu hadli waayay.
Saleebaan intuu qoslay ayuu yidhi “ma anaan garan, walee inaad fariid tahay, adeerkaana ma le’eki ee hay masabidin”
Eman: Adeerkay isaga ayaabad I xasuusisay, isba fariid ayuu igu yidhaa illaa maanta illaa maalintaan dhashay.
Saleebaan: Adeerkaa magacii?
Eman: Maxaad ku falaysaa magaciisa?
Saleebaan: Su’aashaa kama jawaabi karo, laakiin hadaad Soomaaliyad dhaba tahay wax kale ayaad u qaadan lahayd oo imaad weydiiseenba su’aashaas.
Eman iyadoo qoslaysa oo ay ka muuqato inay Saleebaan hadalkiisa xiisaynayso ayay ku tidhi “why is that?”
Saleebaan waxa uu is arkay isagoo shan daqiiqo yartii la taagan oo weli liicin la’ hadalkeeda, kadib waxa uu go’aansaday inuu soo gebogebeeyo.
Saleebaan: Markalaan kuu sheegi, barasho wacan magacaygu waa Saleebaan.
Eman: Anigana Eman adeer.
Wejiga ayuu giir ka yara kiciyey Saleebaan isagoo tusaya inuu kelmada adeer diidan yahay.
Eman si niyad ah ayay u qososhay waliba way is hayn kari weyday oo afka inta ay gacanta saartay ayay la jeesatay qosolkii.
Eman: Sorry mar dambe kuguma odhanayo kelmada adeer Saleebaan. Nice to meet you.
Gacanta ayay usoo fidisay.
Saleebaana wuu gacan qaaday. Isagoo ku leh “koley meel baad u socotay yaanan ku habsaamin”
Eman: Haa waxaan tegayay dukaanka si aan uga soo qabsado waxoogaa adeega.
Saleebaan: Saleebaan haye ana waan yara lugeeyaa xiligan aragti dambe Eman.
Eman gacanta ayay u lushay iyadoo aayar sii jeedsatay bal si aanay gidaar u jiidhin ama u turaanturoon. Saleebaan isaguse isagoon halkii ka dhaqaaqin ayuu sii yara eegay qaabkeeda socodka iyo sida ay u laafyoonayso.
Eman intii ay adeega iibsanaysay waxay nafteeda ku bogaadinaysay siday isaga dhicisay ee sheekada aanu u liicin dhankeeda Saleebaan. Marmarna waxay la yaabaysay sida ay sida degdega ah ula qaaday Saleebaan oo ay ula hadashay sidii qof ay muddo is yaqaaneen. Dhinacna waxay kaga faraxsanayd in aanu noqon nin bahala oo markiiba damac tusa. Ismay arkayn laakiin wejigeedu wuxuu ahaa mid dhoola cadayn darteed ifaya.
Saleebaan laftarkiisa, socodkiisii waxa maskaxdiisa kusoo noqnoqonayay kalsoonida ay Eman muujisay iyo sida ay u hadalo cad-cadayd. Badanka gabdhaha quruxda badan siduu ku ogaa ma aha qaar kaftanka si fiican u yaqaan.
Habeenkaa socodkiisii 30 daqiiqo oo dheeraada ayuu ku darsaday Saleebaan ….
Eman Jacayl jamaal kaftan London naasir Saleebaan
Previous Post Qalbi Dahab
Next Post Siyaasada iyo Maareynta Nolosha